क्रोएसियाली राष्ट्रपति कितारोभिच रगंशालामा पुगेर हुटिङ गरीन् ! - क्रोएसियाली राष्ट्रपति कितारोभिच रगंशालामा पुगेर हुटिङ गरीन् !
क्रोएसियाली राष्ट्रपति कितारोभिच रगंशालामा पुगेर हुटिङ गरीन् !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २९ असार 69 Views
मस्को । युरोपेली राष्ट्र क्रोएसिया रुसमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको पूर्वी युरोपेली मुलुकले आइतबार राति उपाधिका लागि पूर्वविजेता फ्रान्सको सामना गर्दैछ। पूर्वविजेता इङ्ल्यान्डलाई २–१ गोलले स्तब्ध बनाउँदै फाइनलमा पुगेको क्रोएसियाको सफलतामा खेलाडीको मेहनत र प्रशिक्षक ज्लाट्को डालिचको रणनीति मात्रै कारक छैन। क्रोएसियाको सफलतामा अर्का एक व्यक्तिको पनि अहम् भूमिका रहेको छ। ती हुन्, राष्ट्रपति कोलिन्दा ग्राबर कितारोभिच।